အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 27 of 31 | Frontier Myanmar
ဓာတ်ပုံ- ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရန်ကုန်မှဟောင်ကောင်သို့ ပြေးဆွဲသော Dragon Air လေကြောင်းလိုင်း၏ လေယာဉ်တစ်စီးသည် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၁ နာရီကျော်အချိန်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ပျံတက်ထွက်ခွာစဉ် ငှက်နှင့်တိုက်မိသဖြင့် ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း လေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ airplane_2aaa.jpg ဓာတ်ပုံ-.
မြန်မာသည် ၂၀၂၁ ကျမှသာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်နိုင်မည်ဟု အစိုးရအဖွဲ့ပြော
ကိုယ်စားအမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကံဇော် ရှင်းပြစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – စိုးသန်းလင်း နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး ၄၄ နိုင်ငံ LDC တွင် ပါဝင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် နောက်ထပ် ခြောက်နှစ်အကြာတွင် LDC အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌.
ရွှေတူးဖော်ခြင်းကြောင့် မန္တလေးမြို့အနီး လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများနှင့် silicosis ခေါ် ဆီလီကွန်မှုန်၊ ကျောက်မှုန်များ ရှုရှိုက်မိသောကြောင့် ဖြစ်ပွားသောအဆုတ်ရောဂါများ ထိုဒေသတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ အင်ဒရေ မာလာဘာ ရေးသားသည်။ မန္တလေးမြို့အရှေ့ဘက်မတ္တရာမြို့ရှိဒေသခံပိုင် ရွှေသတ္တုတွင်း၌ ကျောက်သားများကိုခွဲရန် ဒိုင်းနမိုက်များ၊ လေဖိအားသုံးလွန်စက်များသုံးကာ သတ္တုတွင်းအလုပ်သမားများက ရွှေတူးဖေါ်နေပုံ။.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အာဏာအချို့ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများထံ ခွဲပေးရန် အစိုးရကြိုးပမ်း
ဓာတ်ပုံ – ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု/မပြု ဆုံးဖြတ်သည့် အခွင့်အာဏာသည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဗဟိုအစိုးရထံတွင်သာ ရှိနေရာ ထိုအခွင့်အာဏာထဲမှ အချို့ကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများထံသို့ ခွဲဝေပေးရန် အစိုးရက ကြိုးပမ်းနေကြောင်း အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး.